WINDOWS 8 ကို SYSTEM ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
သင်၏ Windows 8 operating system ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
မိုက်ကရိုဆော့ဖမှန်မှန်အလို့ငှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုတိုးတက်စေရန်နှင့် bug တွေနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် operating system မြားအဘို့အ updates များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်မီသူတို့ကို install သမျှသောအပိုဖိုင်တွေထွက်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များတပ်ဆင်ရန်မည်သို့မည်ပုံကိုကြည့်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို 8.1 သည် Windows 8 ကနေအကူးအပြောင်းဖြစ်သည်။
OS ကို update ကို windose 8
ယင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအပေါ်ကို Windows 8 အကူးအပြောင်းအဖြစ်အလုပ်ဖိုင်တွေအားလုံးကိုလိုအပ်သော၏ရိုးရှင်းတပ်ဆင်ခ: ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, သင်နောက်ဆုံးသတင်းများ၏နှစ်မျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်းစနစ်၏စံ tools များ၏အကူအညီဖြင့်ပြုသောအမှုနှင့်မဆိုအပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပေါ် updates များကို Install
Download လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ်ပါအပိုဆောင်းစနစ်ကဖိုင်တွေသင့်ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးသင်ပင်ကအကြောင်းမသိရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိသငျသညျမသန်စွမ်းအော်တို updates များကိုရှိသည်, ဖြစ်ပျက်မပါဘူးဆိုရင်။
လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ - ဖွင့်လှစ် "ဒီကို Windows Update ကို"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အိုင်ကွန်ပေါ်ယွမ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီကွန်ပျူတာ" နှင့်ကိုသွား "Properties ကို"။ ဤတွင်လက်ဝဲ menu ကထဲမှာ, တပ်မက်လိုချင်သောအလိုင်း၏အောက်ဆုံးရှာဖွေပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။
ကလစ်နှိပ် Now ကို "updates တွေကို Check" လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ။
ရှာဖွေရေးပြည့်စုံသောအခါ, သင်မှမရရှိနိုင် updates များကိုအတော်များများမြင်လိမ့်မည်။ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဝေဖန်အပ်ဒိတ်များ".
တစ်ဦးက window ကိုအပေါငျးတို့သ updates များကိုစာရင်းပြုစုထားသည့်အတွက်ဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ device ကိုအဖြစ်စနစ် drive ပေါ်တွင်လိုအပ်သည့်နေရာလွတ်၏ပမာဏအပေါ် install လုပ်ဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အသီးအသီးဖိုင်ဖော်ပြချက်ဖတ်နိုင် - အားလုံးသတင်းအချက်အလက်, လက်ျာ pane ထဲကကိုပုံပေါ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Install".
အခုတော့ဒေါင်းလုတ်လုပ်များနှင့်မွမ်းမံမှုများ install လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စောင့်ဆိုင်း, အဲဒီနောက်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။ ဒါဟာအတော်လေးခဏယူ, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ဖြစ်နိုင်သည်။
8 ကနေ 8.1 ကို upgrade windose
အများစုမှာမကြာသေးမီက, Microsoft ဟာ operating system ကိုထောက်ခံမှု 8 မှတ်တိုင်များ windose ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Windows 8.1 ကို - ထိုကြောင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်စနစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို upgrade ချင်တယ်။ အဆိုပါ Store မှာအားလုံးတာဝန်ခံအခမဲ့ပြုသောအမှုကြောင့်သင်, re-ဝယ်လို့လိုင်စင်ရန်ရှိသည်သို့မဟုတ်အပိုပေးဆောင်ကြပါဘူး။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် applications များအပေါငျးတို့သလိမ့်မည်အဖြစ်အသစ်သောစနစ်အကူးအပြောင်း၌သငျ, သင့်လိုင်စင်သိမ်းဆည်းပါ။ သငျသညျစနစ် drive ပေါ်တွင်အလုံအလောက်အာကာသ (အနည်းဆုံး4GB အထိ), နှင့်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
လျှောက်လွှာစာရင်းကိုများတွင်နေရာချထား "ဒီက Windows Store က".
သငျသညျကပြောပါတယ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ button ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် "Windows 8.1 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Next ကို, သင် system ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သောခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ OS ကို၏ဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်စောင့်ဆိုင်း, အဲဒီနောက်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။ ဒါဟာအချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
အခုဆိုရင် 8.1 windose သာအနည်းငယ် configuration ကိုခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။ , ကိုစတင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို၏အဓိကအရောင်ကိုရွေးပါနှင့်ကွန်ပျူတာ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ရန်။
ထိုအခါစနစ်က Settings ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီအသီးအသီးအသုံးပြုသူကိုက်ညီဖို့အကောင်းဆုံး setting များကိုသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်သည် default အသုံးပြီးအထူးအကြံပြုလိုတယ်။
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်သင်သည်သင်၏ Microsoft အကောင့်ကို log သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ဒါဟာခြေလှမ်း optional ကိုဖြစ်တယ်, သင်သည်သင်၏ account ကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှမလိုချင်ကြဘူးလျှင်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Microsoft မှအကောင့်မရှိဘဲ Entry '' နှင့်ဒေသခံအသုံးပြုသူဖန်တီးပါ။
စောင့်ဆိုင်းနှင့်အလုပျအတှကျပွငျဆငျမှု၏မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Windows 8.1 ကိုရယူပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ 8.1 windose ရှစ်၏အုပ်စုအားလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ် updates များကို install ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေပြေနဲ့အလုပ် upgrade ဖို့ဘယ်လို။ ကျနော်တို့သင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကမည်သည့်ပြဿနာကြုံတွေ့ရလျှင် - မှတ်ချက်များအတွက်ရေးလိုက်, ငါတို့ဖြေကြားပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Windows 10 Clear Everything (စက်တင်ဘာလ 2019).